Resaky ny mpitsimpona akotry : Fiala-nenina | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : Fiala-nenina
Nafana ny ady hevitra tao amin’ny Antenimierampirenena manodidina ny fandriampahalemana na ny marimarina kokoa momban’ny tsy fisin’ny fandriampahalemana. Niandahy niambavy nifaninana ny solombavam-bahoaka anome fanazavana mikasika ny horohoro iainan’
ny mponina ho henon’ireo minisitra tompon’andraikitra tonga nanatrika ny fivoriana. Inona indray moa no mbola mila itantaraina antsipirihany an’ireo etraketraka mahatsiravina isan-karazany miseho sy mitatao isan’andro eo amin’ny fiarahamonina na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra. Araky ny hevitry ny mpitazana sasantsasany, fandaniana andro fotsiny ny fitaterana tranga izay efa tsy misy tsy mahafantatra. Araky ny filazan’ireo olona ireo, dia fanontanina mivantana no andrasan’ny mponina apetraky ny solontenany amin’ireo tompon’andraikitra momban’ny tetika pôlitika sy ny fampiharana an’izany mba ahafahan’ny mponina miaina am-pilaminana, fomba fiteny moa izay fa tsy tena hisy ny filaminan-tsaina raha mbola mitombo na mijanona toy izao aza ny vesatry ny fahasahiranana.
Na eo daholo aza izany dia tsy maintsy mitatitra ny zava misy ny solombavam-bahoaka. Iza moa no mahalala na tena tsapan’ireo nandray andraikitra ny fisehon’ny toe-draharaha. Iza no mahita sao sodokan’ny fiadakadanana eo amin’ny toerana nametrahana azy izy ireny ka tsy mahatazana ny tena marina aty anivon’ny fiaraha-monina. Mitaingina fiara anie izy takon’ny fitaratra matroka, toa sady miaro tena analavitra ny zava-misy no tsy mahita ny fahorin’ny vahoaka afa-tsy taratra manjavozavo. Alohan’ny fitakina aminy mba anao an’izay mety, tsy heri-po very maina no manery azy anokatra ny masony ahafahany ahatsapa ny vokatry ny adidy tsy vita.
Ny fialana bala mety ahitana arak’izay tiana, maro izay fialan-tsiny sy fanomezana toky mikasika ny fitondrana fiovana. Bodofotsy rovitra ela anefa izay namadibadihana azy izay, vao miha mitatra ny rovitra dia na tsy manana ahafahana anolona aza ve dia tsy mba tokony ho tonga saina momban’ny fanosohana ny rotika. Adidin’ny solombavam-bahoaka no mandodona ny governemanta, raha tsy manao izany ny Antemierampirenena dia tompon’andraikitra mpiray antoka na mpiara-mitsikomba amin’izay tsy mahavita azy.
Election Présidence Association Accueil Madagascar Dr Raoera Chandoutis reconduite Espace Dera 30 Novembre 2018 #Photo 17/12/2018